तिहारको कोसेली बोकेर भारत फर्कनेको लर्को ! — Bhaktapurpost.com
तिहारको कोसेली बोकेर भारत फर्कनेको लर्को !
काठमाडौं, ६ मंसिर । रुमालले टपक्क बाँधेको स्याउको पेटी काखीमा थियो । एक हातमा झोला र अर्काले सानी नानी डोर्‍याएकी थिइन् । उनको ध्यान स्याउको पेटीमा केन्द्रित थियो । उक्त पेटीमा तिहारका परिकारहरू सेलरोटी, फिनी रोटी र झिनिया थिए ।
सल्यानको शारदा नगरपालिका–३ की २१ वर्षीया मनीषा गन्धर्वको परिवार तिहारको कोसेली बोकेर मजदुरी गर्न भारत गइरहेको हो । नेपालगन्जको जमुनाहा नाकाबाट शुक्रबार सेलरोटीको पेटी बोकेर उनीहरूले सीमा पार गरेका हुन् । भारतबाट पर्व मनाउन एक महिनाअघि घर आएकी मनीषाले सधैं तिहारमा धेरै रोटी पकाउने गरेको सुनाइन् ।
यस्ता परिकार तिहारमा घर आउन नपाएका आफन्ती, साथीभाइलाई कोसेलीस्वरूप लगिदिने गर्छिन् । परदेश पुगेपछि काममा खटिएका बेला महिनौंसम्म यिनै रोटी खाजा हुने गरेको उनले बताइन् । ‘कालापार (परदेश) मा ड्युटीमा खान हुने, उता के ल्याइस् भन्नेलाई उपहार पनि दिन हुने,’ उनले भनिन्, ‘सेलरोटी त जति पुरानो उति मीठो लाग्छ ।’ कामको खोजीमा परदेश जानुलाई पश्चिम पहाडबाट कालापार जानु भन्ने गरिन्छ । मनीषाजस्ता थुप्रै नेपाली यतिबेला पर्व सकिएलगत्तै भारतका सडकमा मजदुरी गर्न जाँदै छन् ।
कोरोना महामारीको संकटसँगै बेरोजगारीको चुनौती थपिएपछि दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दा पोका पन्तुरा बोकेर भारत लाग्ने नियति नै बनेको छ ।
सुर्खेतका अनिल परियारले दसैं र तिहार मनाउन घर आउनुको दुईवटा कारण भएको बताए । एउटा परिवारसँगै बसेर पर्व मनाउने र अर्को गाउँमा बेरोजगार बसेका युवालाई सँगै लिएर भारत मजदुरी गर्न जाने । तिहार सकिएलगत्तै उनी गाउँका १२ जना तन्नेरी सम्मिलित टोलीको नेतृत्व गर्दै भारततर्फ लागे ।
‘सडकमा काम गराउने अवसर पाइएको छ,’ उनले भने, ‘उता कामदारको खडेरी छ, यता बेरोजगार छन् ।’ उनी हरेक महिना गाउँ आउँछन्, मान्छे जम्मा गरेर भारत लैजान्छन् । एक महिनाअघि १० जना युवा मजदुरी गर्न भारत पठाएका थिए । अनिलले मजदुरी गर्न भारतमै बसेका नेपालीलाई कोसेली तिहारका सेलरोटी र फिनी बोकेका थिए । ‘पर्वमा आउन पाएनौं, रोटी ल्याइदिनू भनेका थिए,’ उनले थपे, ‘सेलरोटी बाटाभरि गाडीमै सकिन बेर लाग्दैन ।’
उनीसँगै समूहमा मजदुरी गर्न भारत जाँदै गरेका विकास परियार १८ वर्षका भए । ‘घरको आर्थिक स्थिति कमजोर छ,’ उनले भने, ‘पढ्न सकिँदैन, भारतमा काम पाइन्छ रे, त्यसैले उतै जाँदै छु ।’ बाँकेस्थित खजुरा–२ का ५५ वर्षीय गोकुल बुढाथोकीको परिवार घरमा ताल्चा मारेरै भारत लागेको छ । ओत लाग्ने घरबाहेक एक टुक्रा जमिन छैन । तीन छोराको पालनपोषण गर्न उनी एक्लैलाई हम्मेहम्मे छ ।
एक वर्षअघि अटोरिक्सा चलाउने काम सुरु गरे पनि लकडाउनभरि घाटा लागेको उनले बताए । ‘अटो किनेको किस्ता तिर्नै सकिएन,’ उनले भने, ‘उपाय नलागेर भारत जाँदै छु ।’
शुक्रबार भारत जान जमुनाहा नाकामा बसेकी रुकुम मुसीकोट–१० की गीता कामीको पोकापन्तुरा ठूलै थियो । नातिनातिना र छोरासहित हिँडेकी उनले झन्डै ६ महिनालाई पुग्ने भुटेका मकै खाजा लगेर जाँदै थिइन् । जाडामा लगाउने बाक्ला कपडा,​ ओछ्यानसमेत उनको पोकामा थिए ।
दैलेखका ६० वर्षीय शंकर विष्टको बाल्यकाल भारत आउजाउमै बित्यो । सानैदेखि मजदुरी गर्न सीमापार गरेका उनी अझै त्यही परम्पराबाट अछुतो छैनन् । ‘छोराहरू आफ्नै परिवार पाल्न व्यस्त छन्,’ उनले भने, ‘आफू पालिन मजदुरी गर्छु ।’ शंकर एक्लै थिए तर एउटा ठूलो बोरा काँधमा सकी नसकी बोकेका थिए । तिहारका परिकार, गुन्द्रुक, लोकल चामल, भटमासलगायत सामान कोसेली लैजान लागेकाले यति ठूलो बोरा बनाएको उनले बताए । ‘उता यी चिजको बढो चासो हुन्छ,’ उनले भने, ‘अरूका लागि भए पनि कोसेली बोक्नैपर्छ ।’
गुल्मीको मदानेका भीमबहादुर केसी कोरोना संक्रमणका बेला गत जेठमा भारतबाट घर फर्किएका थिए । केही समय गाउँमा कामको खोजीमा बिताए । उपाय नलागेपछि तिहार मनाएर शुक्रबार कपिलवस्तुको कृष्णनगर नाका हुँदै भारत प्रवेश गरे । घरमा बसेर परिवार पाल्ने खर्च जोहो गर्ने उपाय नभएपछि बिदेसिन बाध्य भएको उनले बताए ।
‘खाने खर्च पुग्ने तलब भए यहीँ काम गर्थें, यहाँ केही काम पाइएन,’ उनले भने, ‘तीन जना छोराछोरी पढाउन र सबै परिवारलाई चामल, नुनतेल किन्ने खर्च जुटाउन भारत जानुपरेको हो ।’ गाउँमा रोजगार पाइएन । भारत पुगेपछि केही काम पाइएला भनेर जान लागेको उनले बताए । पहिला गुडगाउँमा नोकरी गर्थे । कोरोनाले गुम्यो । ‘अहिले गाउँको साथी छ, उसले बोलाएर जान लागेको हुँ, कस्तो नोकरी हो त्यहाँ पुगेपछि थाहा होला,’ उनले भने । यसअघिको नोकरीमा उनी महिनामा नेपाली २६ हजार तलब पाउँथे । त्यसले आमाबाबुको औषधि खर्च, श्रीमतीसहित छोराछोरीको पढाइ र खाने खर्च पुग्थ्यो । श्रीमतीले स्नातक तह पढ्छिन् । ​एसईईपछि श्रीमतीलाई पढाइरहेको उनले बताए ।
कोरोनाका कारण धेरैका रोजगारी गुम्दा गाउँमा घरगोठ निर्माणको काम पनि पाइन मुस्किल बनेको छ । ‘पहिला ऋण काढेर भए पनि गाउँमा घर बनाउने धेरै हुन्थे, कोरोनापछि धेरै कम छ,’ केसीसँगै भारत जाँदै गरेका बलराम विकले भने, ‘म सिकर्मीको काम गर्छु । घर निर्माणको काम नपाएपछि म भारत जान लागेको हुँ ।’ ३७ वर्षीय उनी पहिलोपटक भारत जाँदै छन् । भीमबहादुरका भरमा भारत जान लागेको उनले बताए । सिकर्मी कामबाट परिवार पाल्न पुगेको थियो । गत चैतबाट काम गर्न पाइएन । परिवार पाल्न धौधौ भयो । यहाँ अरू केही रोजगार छैन । भारतमा जस्तो काम पाइन्छ, त्यही गर्ने उनले बताए । घर बनाउने तयारी गरेकाले पनि कोरोना संक्रमणका कारण नयाँ घर बनाउनेको संख्या घटेको उनले बताए ।
चुनावमा सबैलाई स्वरोजगार बनाउँछौं भनेर नेताले भोट मागे । ‘मतदान गरियो, अहिले केही काम लगाइदेऊ भन्दा वास्ता गर्दैनन्,’ गुल्मीको हाडहाडेका घनश्याम घर्तीले भने, ‘जनप्रतिनिधिले न काम दिन्छन्, न नोकरी । यत्तिकै घरमा बस्दा दोकानमा चामल किन्ने पैसा हुन्न, त्यसैले दिल्ली नोकरी गर्न हिँडे ।’ ११ वर्षअघि उनले दिल्लीमै नोकरी गर्थे । घरमा आएर खेतीपाती गरेर बसेका थिए । जवानी उमेरमा गाउँमा बेरोजगार बस्नुभन्दा दिल्लीमा गएर काम गरेपछि परिवारलाई खाने खर्च, लत्ताकपडा, छोराको पढाइ खर्च र बुढेसकालमा दुईरचार पैसा जोहो गर्न भारत हिँडेको उनले बताए । अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिका–६ का विनोद श्रीसले नोकरी खोज्दै पुनः भारत हिँडेको बताए । कोरोनापछि घरमा आएका उनी तिहार मनाएर दिल्लीको पुरानै नोकरीमा फर्किएका हुन् ।
यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा मधु शाही र वीरेन्द्र केसी​ले लेखेका छन् ।